CNIDH momba ny zon’olombelona: “Tsy avela amin’izao ny “Raharaha Antsakabary” sy “Antanimena”” | NewsMada
CNIDH momba ny zon’olombelona: “Tsy avela amin’izao ny “Raharaha Antsakabary” sy “Antanimena””
Aiza ho aiza ny fanajana ny zon’olombelona eto Madagasikara? Raha ny tatitry ny CNIDH, be ny fanararaotam-pahefana. Tsy avela amin’izao fa arahi-maso akaiky ny “Raharaha Antsakabary” sy ny “Raharaha Antanimena”
“Amin’ny ankapobeny, ny mahatonga ny fanitsakitsahana ny zon’olombelona eto amintsika amin’izao fotoana izao: eo amin’ny hoe manitsakitsaka ny zon’ny hafa izay manana fahefana, hery, vola.”
Io ny nambaran’ny filohan’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena momba ny zon’olombelona
(CNIDH), Rabenoro Mireille, tamin’ny fanaovana tatitra isan-taona, teny Antaninarenina, omaly, momba ny fanajana ny zon’olombelona eto Madagasikara, taona 2018.
Miainga hatrany amin’ny hoe hery sy fahefana tsy mitovy ny tsy fanajana ny zon’olombelona. Eo amin’ny 100 mahery eo ho eo manerana an’i Madagasikara ny fitarainana voarain’ny CNIDH amin’izao. Toa tsy manao ny asany ny fanjakana amin’izany: tokony hisy fiarovana ny rehetra momba ny zon’olombelona.
Voalaza, ohatra, ny hoe mitovy avokoa ny olombelona rehetra eo anatrehan’ny lalàna. Manan-jo mitovy izany ny rehetra raha voaaron’ny lalàna. Eto amintsika anefa amin’izao fotoana izao, mampalahelo fa tsy izay no mitranga matetika.
Endrika isehoan’ny tsy fanajana ny zon’olombelona izay, ohatra, ny “Raharaha Antsakabary”, tsy hita izay tohiny sy farany, na efa roa taona latsaka aza (febroary 2017), nahavoarohirohy polisy ampolony. Farany teo, ny “Raharaha Antanimena” nisy fanambanana fitaovam-piadiana nataona miaramila.
Tsy araka ny tokony ho izy ny hoe fanjakana tan-dalàna
“Manameloka hatrany ny fakana an-keriny sy ny fitsaram-bahoaka mitranga izahay”, hoy izy, momba ny fisian’ny fitsaram-bahoaka sy ny fakana an-keriny tato ho ato. Taratry ny fahalemen’ny fitondram-panjakana ireny. Tsy araka ny tokony ho izy ny hoe fanjakana tan-dalàna. Satria tsy matoky ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana ny olona, ka miditra amin’ny hoe fitsaram-bahoaka.
Laharam-pahamehana ny famerenana araka izay azo atao ny fanjakana tan-dalàna. Raha tsorina, Rangory fototry ny afo ny kolikoly. Raha tsy misy ny kolikoly, tsy misy ny fanararaotam-pehefana isan-karazany, ny fakana an-keriny, ny fitsaram-bahoaka.
Nilaza hanamafy ny ezaka amin’ny fanatontosana iraka sy fanadihadiana ny CNIDH amin’izao fahazoany tetibola hiasana izao. Zava-dehibe izay amin’ny fitandroana ny zon’olombelona, ankoatra ny fanaovana lalàna. Saika any amin’ny faritra sy toerana lavitra fanjakana no tena misy ny fanitsakitsahana zon’olombelona.